Umthengisi we-STP we-Forex-Inkampani ye-Forex Central Clearing Inkampani (FXCC)
Jonga ividiyo epheleleyo
Isikhangeli sakho asixhasi ividiyo ye-HTML5.
I-FXCC yasungulwa kwi-2010 ngeqela labaqeqeshi beemarike zangaphandle, ukwakha kumava abo amade kwiimarike zezemali, bazama ukudala inkonzo esekelwe kumgangatho ophezulu wemigangatho ababeya kubafuna njengabaxumi. Inkampani iquka iqela elizinikezelekileyo labaqeqeshi abanamava amaninzi kwi-shishini lemali.
Ukubonelela ngesondlo esikhulu samakhasimende kwi-shishini. Sizinikezele kwimpumelelo yabaxhasi bethu, ngokunikela ngentengo yokukhuphisana, ngokusebenzisa inkqubo enokulungelelanisa kunye neyona ndlela ecacileyo kwi-market forex yokuthengisa. Injongo ephambili ye-FXCC kukuxhobisa abathengi bayo ngazo zonke izixhobo abazifunayo, ukuphuhlisa izakhono zabo, ngelixa bejongwa ngamava okurhweba angalinganisekiyo, ngexesha lohambo lwabo.
Unokwethenjwa, ongabonakaliyo noLungileyo
Imodeli ye-ECN / STP ye-FXCC inikeza abaqeqeshi, abahwebi abakhutheleyo, abaphathi be-hedge fund kunye nabaxumi beenkampani abanokufikelela kwixesha langempela lokusasaza kunye namanani okukhuphisana ngqo ukusuka ekukhokeleni ababoneleli bee-multibank.
Umzekelo we-ECN / STP unikezela abathengi beFXCC inkululeko yokurhweba kwinqanaba lokudlala. I-FXCC isebenze kanzima ekwenzeni ihlabathi le-Forex libala ngokubanzi kunye neqondo elikhulu lokulawula abahwebi.
Umzekelo weshishini okhankanywe ngokusekelwe ekusebenziseni i-Straight Through Processing (STP), apho yonke i-oda ye-FXCC yomthengi ithunyelwa kumaziko ezeMali akhuphisanayo nakwi-qualification, ekupheliseni ubunako baluphi na uphawu lokuxabisa, okanye nayiphi na ingxabano phakathi kwabo baklayenti.
Uhlobo lwe-FXCC 'Ayikho iDesk' yokuqhuba imodeli eza kungena nongenelelo kumthengisi kwaye akukho phetshana. Abathengi bamakhasimende zenziwe ngamanani anikezelwe kwi-FXCC ngababoneleli bentengiso. I-Aggregator yexabiso ihlola ngokuzenzekelayo aba bathengi baqinisekiswa ukuba bafumana udidi olufanelekileyo kakhulu lwe-Bid / Ask Ask price, ukuqinisekisa ukuba zonke iilayali zenziwa ngendlela ekhuphisanayo kwaye ecacileyo.
Kutheni uhlala kwi-Standard xa unako
Amava kunye nokumiselwa
Kwi-Traders kwicala ukusuka kwi-2010, emva kweenkqubo ezifanelekileyo kunye neenkqubo zokuhlangabezana nezilindelo zakho
Ukuba namaqondo aphezulu amava nolwazi, simiselwe ukuba siqonde iimfuno zabaxhasi bethu kunye nokuxhasa abahwebi ekufezekiseni iinjongo zabo kunye neenjongo zokutshala imali. Ngokubonelela ngesibonelelo esisodwa sezinto eziphathekayo, inqanaba le-VIP leenkonzo, lidibaniswe nenkxaso yeklasi ye-24 / 5, indawo yethu yokuthengisa iindleko eziphantsi inikeza isiseko esihle sokuphumelela.
Ukuqinisekisa ukuba zonke iilayali ziyenziwa ngendlela ekhuphisanayo kwaye ecacileyo
Ugxininise ekunciphiseni iindleko zakho zokurhweba kwi-zero kwaye ukwandisa amathuba akho okuthengisa
Sizinikezele kwimpumelelo yabaxhasi bethu, ngokunikela ngentengo yokukhuphisana, ngokusebenzisa inkqubo enokulungelelanisa kunye neyona ndlela ecacileyo kwi-market forex yokuthengisa. I-ECN XL, eyaziwa ngokuba yi-ZERO akhawunti yenye yee-akhawunti zorhwebo ezichanekileyo.
ngenombolo yobhaliso engu-14576.
Ugunyaziswe kwaye ulawulwa yi-CySEC
njengeSyprus Investment Firm (CIF)
kunye nenombolo yelayisenisi 121 / 10.
Jonga onke amaBulungu kunye nokuBhaliswa
IiKomishoni zeZero *
UMark Mark Up
I-ACCOUNT LIVE LIVE * Imigaqo neMeko iyasebenza
Ufuna ukufunda ngaphezulu?
I-CENTRAL CLEARING Ltd ibhaliswe phantsi kwe-International Company Act [CAP 222] yeRiphabhulikhi yaseVanuatu kunye nenombolo yokubhalisa i-14576. Ilayisenisi yeKhomishini yeNkonzo yezezeMali yaseVanuatu (VFSC) njengomniki-nkonzo wezemali olawulwayo kwaye ugunyazisa ukuqhubela ishishini lokusebenzisana neemfanelo eziphantsi koMthengisi kwiSigqeba (uMthetho-mvume) [CAP 70].
I-FX CENTRAL CLEARING Ltd ibhaliswe phantsi kweCyprus Inkampani yoMthetho ngokuBhalisa iNombolo HE 258741. Ugunyazisiwe kwaye ulawulwa njengeCyprus Investment Firm (CIF) yiCyprus Securities and Exchange Commission (i-CySEC), phantsi kweeNkonzo zoTyalo-mali kunye neMithetho yeMarhwebo eMiselweyo ye-2007 (uMthetho 144 (I) / 2007), kwaye ixhomekeka kwi-CySEC Imigaqo. Inombolo yelayisensi yokuLawula i-CySEC ye-FX CENTRAL CLEARING Ltd yi-121 / 10.
IiNkcukacha zeLayisense yeNkampani.
(a) IiNkonzo zoTyalo-mali:
Ukufunyanwa kunye nokuhanjiswa kwee-oda ngokumalunga nomnye okanye ngaphezulu kweeMpahla zeMali.
Ukuphunyezwa kwee-oda egameni labathengi.
(b) IiNkonzo zoNyaka:
Ukugcinwa nokugcinwa kweeNkxaso zeMali kwi-akhawunti yabathengi, kubandakanywa ukulungiswa kunye neenkonzo ezinxulumene nokuphathwa kwemali / yobambiswano.
Ukunika iikhredithi okanye iimali-mboleko kumtyalo-mali ukuba amvumele ukuba enze ukuthengiselana kwiCandelo elilodwa okanye ngaphezulu kweeMali apho iNkampani ibandakanyeka kwintengiso.
Iinkonzo zokutshintshiselana kwamanye amazwe apho ezi nkonzo zixhunyiwe kwiinkonzo zotyalo-mali.